उपत्यकाभित्र प्रदेशको राजधानी हुनुहुँदैन - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
२०७४-११-२ बिचार / प्रतिक्रिया
लामो समय स्थानीय निकायमै काम गरेका डोरमणि पौडेल हेटौंडाको मेयरका रुपमा दुई कार्यकाल बिताएका व्यक्ति हुन् । त्यसपछि नगरपालिका संघको नेतृत्व लिएर १६ वर्षसम्म स्थानीय निकायका लागि आवाज उठाएका उनी प्रदेश नम्बर तीनको मुख्यमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशको अधिकारबारे अझै ४०–५० वटा कानुन बन्न बाँकी रहेको बताउने उनी अझै पनि तल्लो तहसम्मै अधिकार जाओस् भन्नेमा छन् । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्न लागू भएको संघीयताको सफलता प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई बलियो बनाए मात्र सफल हुने बताउने उनको जनतासँगै बसेर र उनीहरुसँगै जोडिएर काम गर्नेहरुले बढी अधिकार पाउँदा त्यसले देशलाई दीर्घकालीन लाभ मिल्ने तर्क छ । २०३० सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय पौडेल चार पटक जेल र १८ पटक हिरासतमा बसेका व्यक्ति हुन् । उनी मानविकी संकायमा स्नातक हुन् । मुलुककै पर्यटकीयस्थल बनेको हेटौंडास्थित सहिद स्मारकका अध्यक्षसमेत रहेका उनी मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पसको अध्यक्ष पनि थिए । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रदेशलाई मुलुककै समृद्ध र नमुना प्रदेश बनाउने घोषणा गरेका उनीसँग विश्वसन्देशका लागि मोहन बास्तोलाले गरेको कुराकानी–
संघीय नेपालको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्छु भन्ने तपाईंले अपेक्षा गर्नुभएको थियो ?
२०३० देखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय व्यक्ति हुँ । चार पटक जेल र १८ पटक हिरासतमा बसेको व्यक्ति हुँ । हेटौंडाको मेयरका रुपमा मैले दुई कार्यकाल बिताएँ । नगरपालिका संघको नेतृत्व लिएर १६ वर्षसम्म स्थानीय निकायका लागि आवाज उठाएको व्यक्ति हुँ । त्यसैले स्थानीय तहलाई राम्ररी बुझेको व्यक्ति पनि हुँ । कुनै समय प्रदेशको मुख्यमन्त्री हुन्छु होला भन्ने मैले स्वाभाविक रुपमा लिएको थिएँ ।
यो ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्दै चुनौतीको पनि सामना गर्ने कत्तिको आँट छ ?
हामीले निकै लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको संघीयता अहिले कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा छ । यो निकै ठूलो त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त भएको हो । त्यसैले हामीले यो कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भने अझै सयौं वर्ष जनताले समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ । मलाई यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्न एक हिसाबले खुशी पनि लागेको छ । संघीयता कार्यान्वयनको अन्तिम चरणमा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर मैले प्राप्त गरेको छु । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको पहिलो मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर पनि मैले प्राप्त गरेको छु । यो ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्दा स्वाभाविक रुपमा म खुशी छु । यो अभूतपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेसँगै मलाई यो जिम्मेवारी पूरा गर्ने चुनौती पनि थपिएको छ । त्यसैले मैले यो अवसरलाई गौरवको रुपमा मात्र हेर्ने भन्दा पनि अवसर र चुनौती दुवैलाई सामना गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने ठानेको छु ।
सबैभन्दा शक्तिशाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्नुभएको छ । जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी काम गर्न त निकै मुस्किल होला नि ?
सबैभन्दा ठूलो स्रोत भनेको जनशक्ति हो । प्रदेश नम्बर ३ का जनता विकास र समृद्धिको सन्दर्भका लागि सकारात्मक छन् । यो नै हाम्रो तागत हो । यहाँ रहेका बहुजाति, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषिक अवस्थितिको परिचालन र पर्यटन विकास अर्को महत्वपूर्ण आधार हो । प्रदेश नम्बर तीन जैविक विविधताको हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । तराई र भित्री मधेसलाई पहाडको सेतुको रूपमा विकास गर्न सक्छौं । यो आफैंमा मानव विकासको आधार बन्न सक्छ ।
प्रदेश नम्बर तीनमा ऐेतिहासिक स्थल पनि उत्तिकै छन् । यति मात्र होइन हाम्रो मुख्य प्राथमिकता विकास र समृद्धि नै हो । तर, त्यसका लागि गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । यसका लागि प्रदेशको मास्टर प्लान बनाउनुपर्ने छ । यसको जगमा अशिक्षा, बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । यसपछि मुलुकका समृद्धिका लागि प्राथमिकताका क्षेत्र पहिचान गर्नुपर्छ ।
हाम्रो प्रदेशको महत्वपूर्ण आधार कृषि नै हो । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्नु नै पहिलो प्राथमिकता हुन्छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि आफ्नै खनिज सम्पदामा आधारित र आफ्नै उत्पादनमा आधारित औद्योगिकीकरणलाई अघि बढाउनुपर्छ । भविष्यको समृद्धिका आधारका रूपमा पर्यटन पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ ।
तपाईंको योजनाले मूर्त रुपमा लिएपछि यहाँका जनताको समृद्धिको सपना पूरा हुन्छ होइन ?
लामो समय राजनीतिमा बिताएको व्यक्ति हुँ । जनप्रतिनिधिको हैसियतमा पनि मैले काम गरेको छु । त्यसैले म योजनाविहीन वा कुनै पनि योजना नै नभइकन मुख्यमन्त्री बनेको होइन । अहिले सबैको चाहना भनेको नै समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हो । हामीले चुनावी घोषणापत्रमा पनि त्यही कुरालाई विशेष प्राथमिकता दिएका छौं । राजनीतिक आन्दोलन समाप्त भयो । अबको आन्दोलन भनेको आर्थिक क्रान्तिकै हो । मेरो पार्टीले अघि सारेको नारा पनि यही हो । त्यसैले मेरो पहिलो प्राथमिकता नै ‘समृद्ध मुलुक, समृद्ध प्रदेश नम्बर तीन’ नै हुनेछ । प्रदेश नम्बर तीनका सबै जनताको मुहारमा खुशी छाएको देख्न सक्ने गरी म काम गर्नेछु ।
नाराले मात्र मुलुक समृद्ध हुँदैन यसका विभिन्न पाटाहरु छन् । त्यसका लागि जनता समृद्ध हुनुपर्छ । प्रदेश नम्बर तीन साधन र स्रोतले सम्पन्न प्रदेश हो । यो प्रदेशमा पर्याप्त मात्रामा साधन र स्रोत छन् । भइरहेका साधन र स्रोतलाई हामीले ठीक ढंगले परिचालन गर्न सक्ने हो भने पनि निकै ठूलो रुपान्तरण गर्न सक्छौँ र जनतालाई राहतको अनुभूति दिन सक्छौँ । प्रदेश नम्बर तीनमा १३ वटा जिल्ला छन् । यी १३ वटै जिल्ला भिन्न–भिन्न प्रकृतिका छन् । सबैभन्दा पहिला यी १३ वटै जिल्लाको कनेक्टिभिटीमा जोड दिनुपर्छ । त्योसँगै कुन जिल्लामा केको सम्भाव्यता छ, त्यो कुराको ख्याल गरेर त्यसैमा जोड दिनुपर्छ । अर्को भनेको कामको प्राथमिकता हो । म कुन कामलाई कुन प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने कुराको ख्याल गरेर अघि बढ्नेछु । यसले पनि मेरो योजनालाई सहज ढंगले अघि बढाउन सहयोग पुग्ने छ ।
पार्टीभित्रै पनि गुटको कुरा छ, काम गर्न समस्या होला नि ?
अहिले निर्वाचनमा उपाध्यक्षलाई नै हराएपछि अघि बढ्न समस्या होला कि भन्ने कुरा आएका छन् । त्यो बिल्कुल हुँदैन । यस्तो प्रतिस्पर्धा पहिलो पटक भएको होइन । यसअघि पनि हाम्रो पार्टीमा धेरै पटक चुनावी प्रतिस्पर्धा भएको इतिहास छ । हाम्रो पार्टीमा प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्ने कुरा कुनै नयाँ होइन । हार्नेले हार स्वीकार गर्ने र जित्नेले सबैलाई मिलाएर अघि बढ्ने नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हुनेछ । जहाँसम्म उपाध्यक्षज्यूले नै चुनावी प्रतिस्पर्धामा हार्नुभयो भन्ने प्रश्न छ । त्यसमा मलाई पनि दुःख लागेको छ । उहाँ जस्तो नेतालाई मैले गर्ने सम्मानमा कुनै कमी हुन दिने छैन ।
तपाईं मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ । राजधानी फेरबदल हुने सम्भावना कत्तिको छ ?
म एक्लैले यहाँ नै प्रदेश राजधानी हुनुपर्छ भनेर हुँदैन । विधि र प्रक्रियाहरु छन् । ती विधि र प्रक्रियाअनुसार नै अघि बढ्ने हो । यद्यपि उपत्यकाभित्र प्रदेशको राजधानी हुनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता अहिले पनि कायम छ । काठमाडौंको चाप घटाउन, व्यवस्थित गर्न पनि त्यहाँ राजधानी उपयुक्त छैन ।